Be lavitra sy mafy ny ratsy vita… | NewsMada
Be lavitra sy mafy ny ratsy vita…
Mitsamboaboatra sy mievotrevotra ery ny mpitondra fa miasa mafy, hono; mandeha sy mihazakazaka be ny fampandrosoana; tsy misy mahavita ny vitany tao anatin’izay 50 taona mahery izay… Marina ve izany? Tsy vitan’ny fanamarinan-tena sy fandokafan-tena ny raharaha. Eo ny vahoaka ifotony sy ny isam-batan’olo-miaina mitsara, raha misitraka inona amin’izao fitondrana izao.
Mba misy fiovana ho amin’ny tsara mba azo iainana sy azo leferina ve, ohatra, ny tsy fandriampahalemana isan’andro vaky, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny ady sy fandrobana tany, ny fisian’ny asa vaovao miforona, ny famotehan’ny vahiny ny tontolo iainana amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany… ? Mahalala sy mahatsapa izay iainany ny vahoaka ifotony, na toy inona filaza.
Tsy izany lafin-javatra ratsy izany ve no tena zava-bita be lavitra ary tsy mbola nisy nahavita teo aloha? Na misy tokoa aza izay lazaina sy ankalazaina ho asa fampandrosoana, tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka ny fandio iray siny. Nefa toa ny ratsy na ny fandoto no be lavitra no ho ny tsara na fandio amin’izao… Izay no mahatonga ny teny tsy misorona hatramin’izay, lakolosy fanairana, fitarainana…
Tena mahadini-tena ve izay fatra-manamarina sy mandoka tena? Izay hoe zava-bita, mety ho eo ihany; ny vita ambadika sy ny fomba fiasa no tsy laitra: tsy mahatakona izany, tsy azo odian-tsy hita. Be sy ratsy lavitra no ho ny teo aloha? Fandoto iray siny be izao, fa tsy iray tandroka intsony. Tsy fanarahan-dalàna, kolikoly avo lenta, kiantranoantrano, fisian’ny tsimatimanota, raharaham-pirenena ananan-kavana…
Avelavela fotsiny amin’izao izany, fa hoe miasa mafy, mandeha sy mihazakazaka be ny fampandrosoana, tsy misy mahavita ny vita? Tsy mahaleo izay kely vita etsy sy eroa, raha misy, ny fahapotehana andro aman’alina sy mihalalina. Tonga hatramin’ny hoe fivarotan-tanindrazana? Na ho lasa hatramin’ny taninketsa vao hikoropahana… Miray tsikombakomba avokoa izay tsy miteny sy tsy mihetsika amin’izao?